Mmehie nne na nna na ịzụ ụmụ
Nne ma ọ bụ nna ọ bụla chọrọ izu okè maka nwa ya. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ụmụ nke anyị, anyị na-elekarị nne na nna ndị ọzọ anya na-enweghị mmasị. O yiri anyị na anyị agaghị akarị ụmụaka, tinye ha n'akụkụ nkuku, leghara arịrịọ na ọchịchọ ha anya. O yikwara anyị na ụmụ anyị agaghị enye anyị ihe mere anyị ga-eji were iwe megide ha, n'ihi na ha, dị ka anyị, ga-abụ ezigbo. Ma ikpo ikuku na-ada n'ụzọ nkịtị site na ụbọchị mbụ mgbe a mụsịrị nwa ahụ, ọ na-apụta na ihe niile dị mgbagwoju anya, anyị jikwa ikpe nke ndị nne na nna ndị ọzọ mee ọsọ ọsọ. Ka anyi gbalịa icheta ihe ndi nne na nna mejuputara mgbe ha zulitere umuaka, nke a agaghi emegharia.
Ndị nne na nna na-eto eto na-emekarị nke a. Nwa a mụrụ ọhụrụ, nke enwere mmasị na ogologo oge, na-eme ka obi dị ọhụrụ, nne na nna nwere nnukwu ọrụ maka nwa ahụ ma malite ịkwado ya. N'ezie, ọchịchọ nke ndị nne na nna iji gbochie nsogbu ọ bụla, ịtụ anya ọchịchọ ọ bụla nke nwa ahụ, iji chebe ya pụọ ​​na mgbu, ọ bụ ihe kwere nghọta. Ma mgbe ụfọdụ, ọ na-agafe ókè niile. Otutu mgbe, enwegh ike igosi uzo n'adighi nma maka nwa, kama n'olu ndi nne na nna ka ha ghara inye ya ohere nke onwe. Ọ ga-adị ka ihe ọ bụla dị egwu bụ na a na-elekọta nwa ahụ nke ọma, ma n'eziokwu. nlekọta dị otú ahụ adịghị ekwe ka nwatakịrị mụta ihe ọ bụla. Ndị nne na nna na-enye ya nri, na-eyiri uwe ya, ma ọ bụrụ na "nwa" ahụ adịlarị oge ịga ụlọ akwụkwọ. A naghị ekwe ka ụmụaka dị otú a na-enwe obi ụtọ na mbara èzí n'enweghị nlekọta nke ndị okenye, ha enweghị ike ịmalite anụmanụ, ihe niile a na-ewere dịka ndị nne na nna nwere ike izere na ndụ ha, a pụkwara ịchọta ihe ndị a ma ọ bụrụ na achọrọ. Njehie nne na nna na nke a na njedebe nke nwatakịrị ahụ na-eyi egwu na ọ ga-eme ka nwa ahụ nwere obi ụtọ na-etolite na nwata ma bụrụ nke a na-edeghị ede na ndụ.
Njehie ndị nne na nna dị ọtụtụ, ma otu n'ime ihe kachasị njọ bụ ileghara nwa nke ya anya. Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ ihe dị mkpa - ndị nne na nna na-arụsi ọrụ ike, na-eme ndokwa onwe ha, nghọtahie n'etiti ụmụ na nne na nna. Mgbe ụfọdụ, ihe mere nwatakịrị ji hapụ nchebara echiche nke ọma nwere ike ịbụ ịṅụbiga mmanya ókè nke ndị nne na nna, na mgbe ụfọdụ ọbụna ịmụba arọ, ndị ncheta ha anaghị ekwe ka nne gosipụta ịhụnanya ya kpamkpam. Nwatakịrị na-etolite n'ezinụlọ dị otú a nwere ike ịla azụ n'azụ, ma e wezụga nke a, a na-ahụkarị nsogbu ọgba aghara, n'ihi na nwata ahụ echeghị na ọ dị mkpa, ọ na-eche onwe ya dị oke ụba na ndụ nke ndị kacha nso. Mgbe ufodu, enwegh ike ile anya n'egosigh ihe obula nke nwatakiri ahu, mgbe ufodu mgbe o na-eti mkpu nke "Enweghm oge" ma obu "echegbula onwe gi," ma ihe ojoo bu ihe ojoo.
Olileanya na-enweghị atụ
Nne na nna ndị ọzọ na - emezighị emezi - na - atụ anya nwa ya nke ukwuu. Ọtụtụ mgbe, ndị nne na nna ma ọ bụ ndị ikwu ndị ọzọ dị nso nke nwatakịrị ahụ na-ahụ nwa ahụ dị ka ohere ikpeazụ iji ghọta ọchịchọ ha. Nne m na-atụ anya ịghọ onye na-agba egwú, nna m chọrọ imeri ụwa, nne nne m na-atụ egwu egwú, a na-agbapụ nwatakịrị a, bụ onye a na-ahụ dị ka onye maara ihe maka ihe a niile. Ihe ize ndụ nke àgwà a bụ na ọchịchọ nwatakịrị ahụ adịghị adaba na atụmanya nke ndị nne na nna, ọ na-eme ihe ọ bụla n'ụzọ, nke pụtara na ọ bụghị ihe dị njọ dị ka ndị nne na nna chọrọ. Nke a na - eduga n'eziokwu ahụ bụ na ndị nne na nna na - akwụsị ịchọta nwa ha dị ka ndị maara, ndị pụrụ iche na ndị nwere nkà naanị n'ihi na ọ gaghị enwe ihe ịga nke ọma na mpaghara ha ga - achọ. Nke a na - eduga n'adịghị ike nkekọ na esemokwu mgbe niile, ọtụtụ mgbagwoju anya na nnukwu nsogbu n'ime ezinụlọ na onye nke ọ bụla.
Ma eleghị anya, ọ bụ naanị mmeghe a enweghị ezi ihe. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe mere eji emegbu ụmụaka, ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha nwere ihe ọ bụla jikọrọ nwata ahụ. Ịhụ ntaramahụhụ siri ike na ime ihe ike na-abụkarị ihe kpatara ndị okenye. Mgbe ufodu, ndi nne na nna enweghi ike ikwu banyere nwatakiri ahu, ha anaghi achoputa odidi ya na echiche ya, echekwala na omume di otua. Ịgba aghara na obi ọjọọ kụziiri nwatakịrị ahụ na ọ na-emeso onwe ya na ndị ọzọ n'ụzọ dị otú a, nke pụtara na e nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na onye isi ike ọzọ ga - esi n'ezinụlọ dị otú ahụ pụta. Na mgbakwunye, o nweghi mkpa ọ bụla ikwughachi na mmegbu nwatakịrị a dị oke egwu ma maka ndị nne na nna - dịka iwu, ha tolite, ụmụ anaghị echezọ mmejọ nke ndị mụrụ ha ma chee na ọ bụ ọrụ ha ịbọ ha. Enwere ike igosipụta nke a ma na-elegharaghị ya anya kpamkpam, na ime ihe ike. Banyere obi ụtọ n'ezinụlọ ndị a abụghị ajụjụ.
N'ezie, njehie nne na nna nwere ike ịdị iche. Anyị nwere ike ime ihe na-ezighi ezi, ọ bụghị dịka nghọta, mana ibu ọrụ nke ndị nne na nna iji cheta na omume ha ekwesịghị imebi nwa ahụ. Naanị iji ezi uche na ezi uche maka agụmakwụkwọ, ezinụlọ nwere ike ịghọ obi ụtọ.
Ịzụ ụmụ nwanyị
Mmetụta nke ịṅụ mmanya na-ahụ maka mmepe ahụ na-adịghị mma nke nwa
Otu esi achikota uzo n'ime ime umuaka
Iwe na iwe na nwata: ihe ị ga-eme?
Ihe nke egwu ụmụ
I kpebiri iwere nwa gị wee buru n'uche na ...
Otu esi enyere nwatakiri aka idi nsogbu nke afo ato
Biography nke Olga Ostroumova
Ihe oriri ndị dị na vitamin B9?
Kuki si buckwheat ntụ ọka na cheese cheese
Chocolate chocolate na style Brazil
Otu esi achọpụta ụdị onye mmadụ site na ọbara
Ọgwụgwọ na magburu onwe Njirimara nke coral
Nyere nwa gị aka na colic na bloating
Kedu ovary polycystic na ihe ndị dị aṅaa?
Ngwaahịa nwere folic acid
Ọ bụghị ụdị ha na ihe ọjọọ, àgwà ọjọọ ndị a
Ọzụzụ: Ndị ahịa ahịa na-achọ
Ọnụ ọgụgụ dị na ụmụ mmadụ
Shish kebab si ọkụkọ na oven
Ụdị ntutu isi kachasị mma nke oge mmiri-oge okpomọkụ 2016
Glutamate sodium, mmetụta dị n'akụkụ
Ịgba afa n'ịgba egwu: ihe nke kaadị, ịkọ ọgaranya, ịhụnanya
Ụmụaka nwere ike ịnọnyere anu ulo
Avitaminosis na aka na ihu